पाकिस्तानमा आत्मघाती आक्रमणबाट हत्या गरिएका २० जनाको अन्त्येष्टिमा हजारौँ सहभागी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
पाकिस्तानमा आत्मघाती आक्रमणबाट हत्या गरिएका २० जनाको अन्त्येष्टिमा हजारौँ सहभागी
एजेन्सी । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा भएको आत्मघाती हमलामा परी मृत्यु भएकाको अन्त्येष्टिमा बुधबार हजारौँ सहभागी भएका छन् ।
तालिबान लडाकूहरूले गराएको भनिएको विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका २० जनाको अन्त्येष्टिका लागि बधबार हजारौँ सहभागी भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
अन्त्येष्टिमा झण्डै ३० हजार जना सहभागी भएको एक जना वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । यही जुलाईको २५ तारिखका दिन हुन लागेको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्नेगरी हिंसात्मक गतिविधिहरू भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
पाकिस्तानको उत्तरपश्चिमी शहर पेशावरमा मंगलबार अबेर पछिल्लो ठूलो आत्मघाती विस्फोटन भएको थियो । निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि भएको चुनावी ¥यालीमा सहभागी भएकामाथी आत्मघाती आक्रमण हुँदा केही नेता पनि मारिएका जनाइएको छ ।
आक्रमणमा अवामी नेशनल पार्टीका एकजना स्थानीय नेता अवामी हरूर पनि मारिएका छन् । उनी पनि सो निर्वाचन ¥यालीमा सहभागी भएका थिए । पाकिस्तानमा चुनावी प्रचारप्रसार अभियान शुरु भएसँगै देशमा हिंसा भड्किने त्रासबीच मंगलबारको दुखद् घटना भएको हो ।
मंगलबार भएको हमलाको तालिबान लडाकूहरूले नै जिम्मेवारी लिएका छन् । हिंसात्मक घटना हुन थालेसँगै आगामी निर्वाचनका लागि सुरक्षा खतरा रहेको चर्चा पाकिस्तानमा शुरु भएको छ ।
पाकिस्तानी सेनाले भने सुरक्षा र निर्वाचन सम्पन्न गर्न मात्र आफूहरू खट्ने स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचनका लागि करिब तीन लाख ७० हजार सेना खट्ने र आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहने पाकिस्तानी सेनाका उच्च अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् ।